Gaazexeessaa Imbaasii biyyasaa keessatti ajjeefame - BBC News Afaan Oromoo
Jamaal kibxata darbe Tuurkii, Istaanbulitti kan argamu qonsiilaa saawudiitti beellama qaba ture. Dhimmoota gaa'ilaan haadha warraa isaa duraan walhiikee cufuuf haadha warraa isaa dhiheenyaa kan lammii Tuurkii waliin gara imbaasiitti imale. Haadha warraa isaa tanaanis ''mooraa imbaasichatin alatti na eegi nan dhufa'' jedheen. Achumaan osoo hin deebi'in hafe.
Shakkiin jalqabarra ture sawudiitu ukkaamsitee gara biyyaatti deebiste kan jedhu ture. Odeeffannoon dhiheenya bahaa jiran garuu achuma qonsiilaa sawudii keessatti iccitiidhaan akka ajjeefame kan agarsiisudha.
Lammiin Sawudii Jamaal Kashugiin ammaan dura maatii mootota biyyattiif gorsaa ta'uun tajaajilaa nama turedha. Gara boodarra garuu gaaffiwwan mirgaa gaafachuu jalqabuu isaatin ija hamaan ilaalamuu eegale. Haalichi hammaachaa dhufuu isaatinis booda gara Tuurkiitti baqate. Achi taa'unis sirna bulchiinsaa Saawudii qeeqaa ture.
Angaa'onni Tarkii Dhimma ajjeechaa isaa irratti yaada kennuun hariiroo Saawudii waliin qaban gufachiisa jedhanii sodaachuun callisaa turanis kaleessa garuu dhimmicha ifoomsaniiru. Jamaal Qonsiilicha keessatti ajjeefame jechuunis BBC'tti himan. Sawudiin garuu,''Lammii kiyya barbaadaan jiraati baarbaaduu na gargaaraa'' jechuun ibsa qoosaa fakkaatu baasteerti.
Fifinnee: Magaalaa waan hundan ukkaamamtuu
Jamaal Kaashugii barreessaa beekamaa yoo ta'u,Waashington Post irrattis maxxansaalee baasun maqaa gaarii qaba.
Isa waliin gara qonsiilaa Saawudii deemtee kan turte haati warraa isaa ''akka carraa yoon deebi'uu dhabe lakkoofsa kanaan nama gargaaraa Ressip Teyyib Erdogan ta'eef bilbilii himi'' jedheenii akka ture ibsite.
''Namni du'ee yoo awwaalamuu fi dubartoonni gudeedaman argeera''